Akụkọ - Dijitalụ nnukwu ngosi elekere mkpu
Elekere mkpu ọgbara ọhụrụ dị ka ihe ndozi ụlọ
Ọnụọgụ buru ibu maka mfe ịgụ
Ọ ga-amasị anyị igosi gị elekere tebụl nnukwu ihuenyo ọhụrụ anyị na-arụ ọrụ na ya.Emebere ya ka ọ gosipụta ịdị mfe imewe wee wuo ya site na iji akụrụngwa na usoro ọhụrụ iji mee ka ngosipụta zuru oke site na elekere tebụl a.
Ọ dị n'elu bọtịnụ dị mfe iji rụọ ọrụ SNOOZE/LIGHT, yana ìhè azụ ọnwa dị nro dị ọcha.Ọ bụ ya na minimalist imewe.A na-eji ya n'ụlọ na ọfịs anyị maka ndụ dị mma na nke ndụ mgbe niile maka ndụ anyị kwa ụbọchị.
Anyị Tilt LCD ihuenyo ntakịrị Iji nweta ihe nlele kacha mma site na desk.Ngosipụta oge buru ibu, Nhọrọ maka Redio ejiri ọrụ DST na-achịkwa (DCF, MSF, JJY,WVVB).Kalịnda na-egwu ọnwa, ụbọchị na ụbọchị izu
Gụnyere Ime ụlọ okpomọkụ & iru mmiri, Okpomọkụ ngosi na ℃ ma ọ bụ ℉, Ime ụlọ temometa nso si -10 ~ + 50 ℃ , Ime ụlọ iru mmiri nso 10 ~ 99% RH.
Ọ na-eji oge dị mfe iji rụọ ọrụ STAND-ONONE, ntọala mkpu yana bọtịnụ ON/ Gbanyụọ
Ọrụ ebe nchekwa mbelata ike: Mgbe ebipụrụ ike, chịkọtaghachi batrị (2 * AA) n'ime oghere batrị n'ime sekọnd 30, a ga-eburu oge izizi n'isi.Ịkwesighi ịtọgharịa oge ọzọ.Ihe ngosi batrị dị ala.
Ọ bụ n'iji ntọala oge dị mfe iji rụọ ọrụ STAND-ONONE, ntọala mkpu yana bọtịnụ GBAnwuo/ Gbanyụọ.2pcs High mma ụkwụ roba gụnyere.
Akụkụ: 144 * 44 * 59 mm, Jiri 2 "AA" alkaline batrị, ndụ ihe dị ka ọnwa 12.
Oge nzipu: Mee-31-2022